Badbaadiyaha warshad dharka: Qalab jeebka xawaaraha sare ku sameeya | TOPSEW
Taxanaha TS-199 jeebka dejiyawaa mashiin xawaare sare oo otomaatig ah oo loogu talagalay dharka tolidda jeebka. Kuwanijeebka dejiyamashiinada waxay leeyihiin saxnaan tolid tayo sare leh. Marka loo barbardhigo soosaarka gacanta ee soojireenka ah, waxtarka shaqada waxaa lagu kordhiyay 4-5 jeer. Mid jeebka dejiyamashiinku wuxuu isla mar ku dhameystiri karaa meeleynta, laabashada iyo tolida jeebabka. Hal hawl wade ayaa shaqeyn kara labojeebka dejiya mashiinada, iyo waxtarka shaqadu wuxuu noqon karaa mid aad u sareeya sida 2500-3000 gogo '/ 8 saacadood.
Faa'iidooyinka taxanaha TS-199:
1, Kaliya kuma haboona dharka la tolay, laakiin sidoo kale waxay ku habboon tahay maro tolmo leh iyo dharka denim.
2, Xaqiijinta tolida ayaa sarraysa, iyo tolida jeebka jeebka (0.5mm-0.8mm) waa xitaa.
3, caaryada loo habeeyay, waxay la kulmi kartaa dhammaan noocyada qaababka jeebka, sida ku xusan isbeddelka isbeddelka suuqa si dhakhso leh looga jawaabo si loo hubiyo saamiga suuqa macaamiisha.
4, Nidaam shaqsiyeed. Muuqaalka taabashada muuqaalka, si fudud loogu shaqeeyo luqado badan. Nidaamka saaxiibtinimada leh ee hawlgalku wuxuu awood u siiyaa hawlwadeenka inuu si dhakhso leh u soo galo gobolka shaqada, dhammaystiro dejinta cabirro kala duwan iyo inuu ilaaliyo hawlgalkajeebka dejiya mashiinka.
5, Si fudud loo ilaaliyo, bedelka caaryada ayaa aad ugu habboon. Dhamaan xirmooyinka bedelka caaryada waxaa lagu dhameystiri karaa 8 daqiiqo gudahood, iyadoo si weyn u wanaajinaysa wax soo saarka wax soo saarka
6, Qaabeynta qalabka ayaa la jaanqaadaysa heerarka heerka koowaad ee warshadaha. Ku qalabaysan madaxa mashiinka culus, dhammaan qaybaha elektarooniga ah waxaa sameeya soo saarayaasha caanka ah ee adduunka.
Faa'iidooyinka ugu weyn ee jeebka dejiyamashiinka ayaa ah: jeebka isku laaban, tolida, soo uruurinta qalabka hal mar, tolid xawaare sare leh, oo ku haboon dhamaan noocyada kala duwan ee dharka, caaryada loo habeeyay, tikniyoolajiyad shaqsiyeed, howl fudud, caaryada dhaqsaha badan leh, iyo tolida wanaagsan. Ka sokow, astaamaha ugu weyn eejeebka dejiya wuxuu tolayaa shaati laba jibbaar ah iyo jeebado jiinis ah.